त्रास, विचल्ली, विपत्ति र आँसुसँगै सकिए पर्व - Pradesh Today त्रास, विचल्ली, विपत्ति र आँसुसँगै सकिए पर्व - Pradesh Today
नेपालको वि.स.२०७६ सालको अन्तिम महिना फागुनको बिदाइ चैत्र महिनाकोे शुरूवात हुँदै थियो । देशमा एकाएक हतार, त्रास, विचल्ली, विपत्तिको सिर्जना हुनथाल्यो ।
समाजमा एकप्रकारको अनौठौ, पत्यार गर्न पनि नसकिने, विकल्पहरू पनि नअपनाई नहुने, अति संवेदनशील, दुःख, पीडा, महाविपत्ति, विश्वलाई नै प्रभावित पार्ने गरी संसारकै विज्ञ, विद्वान्, धनाढ्य एवं समृद्धशाली देशको रूपमा मानिने चीनको वुहान भन्ने शहरबाट कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नामक अति खतरनाक जीवाणुबाट सरूवा रोगको उत्पत्ति भयो ।
जब त्यो रोगको उत्पत्ति भयो । मानव जातिले अन्य रोगसरह साधारण माने । तर त्यस्तो साधारण प्रकारको रोग यो होइन यो । एकप्रकारको खतरनाक लक्षणसहित र बिना लक्षण पनि सर्न सक्ने खाले रोग भएको कारणले नै यो रोग लुकाउनुभन्दा आमजगत्मा जानकारी गराउनु नै उचित ठानेर यसका विशेषज्ञ जसले रोग पत्ता लगाउन सफल भए उनले नै राज्यले दिएको निर्देशन,
नीति, नियमलाई मिचेर रोगको अवस्थाको बारेमा आमजगत्लाई सूचित गराए । तर विश्वकै दुर्भाग्य उनी यो संसारबाटै बिदा लिए । सायद उनी बाँचेको भए आज संसारको यो दुर्गति हुदैन थियो की ? जब उनी संसारमा रहेनन् त्यसपछिको अवस्था दर्दनाक, बेहाल हँुदै चस्नको काबु बाहिर आउन थाल्यो ।
विस्तारै चीनका छिमेकी देश, चीनसँग हरेक कार्यमा निकट आउजाउका देशहरूको मार्ग हँुदै मानव जातिको लापरवाहीको कारण कोरोना भाइरसको क्षमता कति हो ?
भन्ने आँकलन नगर्नाको कारण, कोरोना भाइरसलाई हेपाइलो दृष्टिकोणको कारण र मानव जातिको चलाखीपन अवसरवादी चरित्रको कारण, जहाँ कोरोनाले आक्रमण गर्दैछ त्यहाँबाट बाहिरिन पाए सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने बुझाइको कारण कोरोनाले विश्वभरी आफ्नो पकड जमाइ छाड्यो ।
त्यही क्रममा नेपालमा पहिलोपटक कोरोनाको आक्रमणको शुरूवाती हुँदै गर्दा २०७६ चैत ४ गते विदेशबाट ९५ जना विमानमार्फत नेपालमा भित्रिए । तिनीमध्ये एकजनालाई कोरोना पोजेटिभ थियो । त्यसपछि फेरी एकजनालाई देखियो ।
निकै लामो समयसम्म यत्ति दुईजना मै सिमित रह्यो । त्यसको उपचार राज्यले गरी सकेको, फैलन नदिनका लागि विकल्पहरूको प्रयोग उपयोग गर्नकै लागि लकडाउन, पिसीआर टेष्ट,
मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग, नाकाहरू सिल, बन्द, जमघट गर्न नपाइने, जथाभावी हिडडुल गर्न नपाइने, विभिन्न मास जुट्नेखाले धार्मिक, सभा सम्मेलन, विद्यालय, रेष्टुरेन्ट, बार, कलकारखाना, फ्याक्ट्री सबै बन्द भइसकेका थिए ।
जसलाई महाविपत्तिमा तड्पी–तड्पी बाँच्नु परेको छ तिनैमाथि कृत्रिम ज्यादती महंगी, कालो बजारी, भ्रष्टाचार, कृत्रिम अभाव, लुटपाट, ब्रह्मलुट, राहत वितरणको नाममा आ–आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण, नक्कली सामानको बेचबिखन, बिचौलियाहरूको चलखेल कुकृत्य, अमानवीय ब्यवहारका कारण गरिब, निमुखा, सर्वसाधारण, गरिखाने सर्वहारा वर्गमाथि त चौतर्फी प्रकृतिको पनि राक्षस मतिका नरपिचासहरूबाट हुनसम्मको हर्कत भएपछि मानिसको अन्तिम विकल्प के ?
त्यतिबेलाको राज्यको पोलिसी जे–जस्तो भएपनि कोरोना आमसमुदायमा फैलनबाट केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने थियो । तर मानिसमा एकखाले उकुसमुकुस छटपटाहट, मानसिक समस्या पैदा हुँदै थियो । मानिसमा एकखाले बाध्यात्मकको अवस्थाले बाटो खोज्दै थियो।
किनभने प्रत्येक दिन ज्याला, मजदुरी गरी खाने वर्गको पेशा ब्यवसाय पूरै ठप्प हुँदा आर्थिकको पाटो पूरै जाम भयो । जसको कारण चुल्हो बल्न नसक्ने अवस्था हुनथाल्यो । अर्कोतर्फ विदेशबाट स्वदेश फर्कने र फर्काउने कारण मानिस बाध्यताबश जन्मभूमिमा आउन पाए मरे आफ्नै माटोमा आफ्ना परिवारमा जे हुन्छ भन्दै ओइरिन थाले ।
ति विचराहरूमाथि ठूलो अन्याय अत्याचार भयो । बिचराहरूको बिचल्ली नै भयो । न त घर, न त जागिरमा । बीच बाटोमा महिनौ दिनसम्म अलपत्र परे । त्यही बेलामा भारतले चारवटा प्रदेश पूरै खुकुलो बनाएर आफ्नो देशबाट स्वदेश फर्कको अभियान ल्यायो ।
ति बिचाराहरूको त झनै आपत, विपत, त्रास, बेखर्ची, भोकै, तिर्खै, कोही रूखमुनी, कोही बीच सडकमा अझ तिनैमाथिको अमानवीय राक्षसी ब्यवहार मानिस कति पीडा खप्न सक्ला ? यस्तो समयमा एउटा मानवले अर्को मानवमाथि गर्ने ब्यवहार कत्ति पनि मानवताको नातासम्म सोचेन ।
जसलाई महाविपत्तिमा तड्पी–तड्पी बाँच्नु परेको छ तिनैमाथि कृत्रिम ज्यादती महंगी, कालो बजारी, भ्रष्टाचार, कृत्रिम अभाव, लुटपाट, ब्रह्मलुट, राहत वितरणको नाममा आ–आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण, नक्कली सामानको बेचबिखन, बिचौलियाहरूको चलखेल कुकृत्य,
अमानवीय ब्यवहारका कारण गरिब, निमुखा, सर्वसाधारण, गरिखाने सर्वहारा वर्गमाथि त चौतर्फी प्रकृतिको पनि राक्षस मतिका नरपिचासहरूबाट हुनसम्मको हर्कत भएपछि मानिसको अन्तिम विकल्प के ?
यस्तो अवस्था २०७६ सालको अन्तिम जतिबेला सम्पूर्ण चाडपर्व सकिएर अन्तीमको चैते दशैँ थियो । त्यतिबेलाको चैते दशैँसम्म चाडकै रूपमा मानियो । त्यसपछि खासै पर्वहरू थिएनन् ।
पाएको कल्पना तीजसम्म कोरोनाको निर्मूल हुन्छ भन्ने आशा थियो तर ठीक विपरीतको अवस्था सिर्जना हुनथाल्यो । संक्रमणको दर, मृत्यु दर ह्वात्तै बढेपछि चाडपर्वहरू हाँसो, खुसी, मिलन, सुख, दुःख, भेटघाटभन्दा पनि आफन्तमै भए । त्रास, पीडा, विपत्ति, बिचल्ली चाडपर्वकै दिन घर–घरमा रूवाबासी भोग्नुप¥यो ।
तीज पनि दिदीबहिनी जो जहाँ छ । त्यही मनाउने अझ त्यसमा आवतजावतमा कडा गर्ने, रातको समयमा कफ्र्यु लगाउन राज्य पनि बाध्य भयो ।
त्यसपछिको हिन्दूधर्मालम्बीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण धेरै लामो समयसम्म मानिने, टाढा–टाढाकाहरू पनि दशैँ भन्दै बर्ष भरीका योजना दुःख, सुख गरी घर फर्कनेहरू पनि जसरी आउनु पर्दथ्यो त्यति आउन सकेनन् ।
आएकाहरू पनि अनिवार्य १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइन्मा बस्नुप¥यो कोही त्यही कारणले आउन मन गरेनन् । कोही आउँदा आउँदै बाटैमा संक्रमण भयो । त्यही निहुँमा ज्यान गयो ।
यिनै यस्तै कारणले गर्दा मानिसमा एकखाले भय, त्रास, निरासा, शोक, मानसिक समस्याले चाडपर्वभन्दा पनि बिरामीलाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त भइएला ? भन्ने पिरलो, घरपरिवार आई आफन्तलाई कसरी बचाउने होला?
भन्ने चटारो चिन्ता भएपछि खुसीयालीभन्दा पीडा, हाँसोभन्दा आँसुको भेलसँगै बाँच्नुपर्दा बाँचेकाहरू पनि मान्यजनको घरमा जानुभन्दा नजानु ठिक हुने मान्यजनले पनि सकभर नआए हुन्थ्यो की भन्ने हुने । आई हाले पनि के गर्ने ? के गर्ने ? मर्नु न बाँच्नु, थुक्नु न निल्नुको अवस्थाहरू सिर्जना भयो ।
दशैँ त यसै बित्यो । कोही त्रासमा, कोही आफन्तको शोकमा, कोही क्वारेन्टाइनमा, कोही आइसुलेसनमा, कोही आफन्तको मर्ने बाँच्नेको पर्खाइमा, कोहीको घरको अभिभावक नै गुमेपछि बिचल्लीमा परेर रूदै शोक, चिन्ता, पीर, बेसहाराको जीवन भोकभोकै तड्पिएर बाँच्नुप¥यो र त्यसपछि लगत्तै तिहार आयो ।
वास्तवमा ठूलो पर्वको रूपमा लामो समयसम्म मनाउने पर्व दशैँ भएता पनि दशैँभन्दा अझ रमाइलो दिदी, बहिनी, दाजु, भाइको महत्वको चाड घर–घरमा सप्तरंगी बिरंगी, झिलिमिली देउसी भैलोबाट गाउँबस्ती डाँडापाखा गुञ्जयमान हुने घर–घरमा यमपञ्चकको पूजाआजा धनधान्य लक्ष्मीको पूजाआजाले मन मस्तिस्क नै आत्मबाटै खुसीयाली छाउने पर्व भनेको तिहार हो ।
यस्तो चाडपर्वमा घरमा दिदीबहिनी आउँदा पनि दाजुभाइ, दिदीबहिनीको घरमा जाँदा पनि मिलनको आतुरभन्दा बिछोडकै आतुरले सताउने ग¥यो । प्रायले त दशैँमा फोनबाट भिडियोमार्फत आशिष दिएजस्तै तिहारमा पनि फोन, भिडियोबाटै रूदै पीडा पीर दुःख साटासाट गर्नुपर्ने बाध्य भयो । गाउँ, शहर, बस्तीहरूमा न त मादल बजे न त भैलो भयो ।
गाउँ, बस्ती नै शोकाकुलमा परेजस्तो, बस्ती नै उजाड भएजस्तो, भेट भएका दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा पनि सेनीटाइजर, साबुन पानी, मुखमा मास्क लगाएर टाढैबाट टीका लगाएर समय बिताउन बाध्य भएपछि बर्षभरीका गत २०७६ सालको चैते दशैँदेखि २०७७ सालको तिहारसम्मका सम्पूर्ण चाडपर्व त्रास, पीडा,
चिन्ता, शोक, भोक, विपत्ति, विचल्ली र आँसुका भेलहरू बगाउँदै मनाइयो भन्नुभन्दा जबरजस्ती धकेलियो । यस्ता दिन, यस्ता विपत्तिको घेरा बन्धनभित्रका चाडपर्व फेरी कहिल्यै मान्नु नपरोस् ।